Heshida rindrina loko hoso-doko
Fampidirana: Ny hosodoko haran-doko Heshida dia mampiasa pôlitika vaovao iraisam-pirenena, Tsy misy fandotoana ny tontolo anatiny sy ivelany. Ity vokatra ity dia manana rano mahery, vovoka, mpamono afo, miaraka amin'ny fikorohana, famaohana ary fananana hafa, fananganana tsotra, fihazonana loko tsara, ary loko vaovao. Azo atao anaty vokatra isan-karazany izy io toy ny sary noporofoina, loko vita amin'ny vy vita amin'ny hoso-doko, sary hoso-doko, loko hoso-doko, hoso-doko vita amin'ny sandstone, sns.
Fitambaran-javatra azo ampiharina: 90-100 metatra metatra / Kintana fitiliana: Famirapiratry ny hazavana maoderina: Telopolo ~ dimampolo (30 ~ 50) Minitra. Atolotry ny atitany: Avelao ny Telopolo ~ Dimampolo (30 ~ 50) Minitra alohan'ny hamerenana azy. Maina amin'ny alàlan'ny: dimy (5) henjana ny sarimihetsika maina: 1.5mm / fomba fampiharana ny kodiarana: Volon-doko, boribory na sakamalaho. Fonosana: 5kg / Bag, kitapo / baoritra manify: Ny fampidirana vovo-dronono ho rano dia 1: 1,4 ~ 1: 1,6. Kolontsaina misy: Misy loko fototra 9, afaka mampiasa ireo loko 9 fototra miaraka amin'ny endriny samihafa mba hahazoana ...